ယူကရိန်းအကြပ်အတည်းတွေ ပိုပြီးနက်ရှိုင်းလာတာနဲ့အမျှ ရုရှားအပေါ် တင်းကြပ် တဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတိုးလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုသံတွေ ပိုပြီးကျယ်လောင်လာချိန်မှာပဲ Brent ရေနံစိမ်းဈေးတွေ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တက်လာပါတယ်။
Brent ရေနံစိမ်းတစည်ကို ဒေါ်လာ ၁၀ ကျော်ဈေးတက်ပြီး ဒေါ်လာ ၁၂၀ ကျော်ထိ ဈေးပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါတဲ့နေရာတွေကို ရုရှားတို့ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်နေချိန်မှာပဲ ယူကရိန်းရဲ့  အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်အဖြစ် ရပ်တည်မှုကို ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမီယာပူတင် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုတွေ ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် ရေနံဈေးတွေ ထိုးတက်လာတာပါ။
ဂျာမနီ DAX အစုရှယ်ယာဈေးတွေ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဈေးကျခဲ့သလို ဥရောပနဲ့ အာရှ အစုရှယ်ယာဈေးကွက်တွေလည်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြိး အမေရိကန် ကြိုရောင်း ကြိုဝယ်ရှယ်ယာဈေးတွေလည်း အကျဘက်ကိုဦးတည်နေတာပါ။ မော်စကို အစုရှယ်ယာဈေးကတော့ တနင်္လာနေ့မှာ ပိတ်ထားပါတယ်။
ရွှေဈေးတွေလည်းတက်နေပြီး တအောင်စကို ၂၅ ဒေါ်လာထိ ဈေးတက်လာတဲ့အတွက် လက်ရှိရွှေတအောင်စ ၁၉၉၂. ၉ ဒေါ်လာဈေးပေါက်ပါတယ်။ ယူကရိန်းအကြပ်အတည်းကြောင့် ရေနံဈေးတွေတက်နေချိန်မှာပဲ လစ်ဗျားနိုင်ငံက နိုင်ငံပိုင်ရေနံ ကုမ္ပဏီတခုကို လစ်ဗျားလက်နက်ကိုင်တွေပိတ်ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖိအားတွေ ထပ်ပြီးတိုးလာနေပါတယ်။
ယူကရိနျးအကွပျအတညျးတှေ ပိုပွီးနကျရှိုငျးလာတာနဲ့အမြှ ရုရှားအပျေါ တငျးကွပျ တဲ့ ပိတျဆို့ဒဏျခတျမှုတိုးလုပျဖို့ တောငျးဆိုသံတှေ ပိုပွီးကယျြလောငျလာခြိနျမှာပဲ Brent ရနေံစိမျးဈေးတှေ ၁၂ ရာခိုငျနှုနျးကြျော တကျလာပါတယျ။
Brent ရနေံစိမျးတစညျကို ဒျေါလာ ၁၀ ကြျောဈေးတကျပွီး ဒျေါလာ ၁၂၀ ကြျောထိ ဈေးပေါကျခဲ့ပါတယျ။ မဟာဗြူဟာအရ အရေးပါတဲ့နရောတှကေို ရုရှားတို့ ကြူးကြျောသိမျးပိုကျနခြေိနျမှာပဲ ယူကရိနျးရဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာပိုငျအဖွဈ ရပျတညျမှုကို ရုရှားသမ်မတ ဗလာဒီမီယာပူတငျ ခွိမျးခွောကျပွောဆိုမှုတှေ ထှကျလာပွီးတဲ့နောကျ ရနေံဈေးတှေ ထိုးတကျလာတာပါ။
ဂြာမနီ DAX အစုရှယျယာဈေးတှေ ၅ ရာခိုငျနှုနျးနီးပါးဈေးကခြဲ့သလို ဥရောပနဲ့ အာရှ အစုရှယျယာဈေးကှကျတှလေညျး မငွိမျမသကျဖွဈနပွေိး အမရေိကနျ ကွိုရောငျး ကွိုဝယျရှယျယာဈေးတှလေညျး အကဘြကျကိုဦးတညျနတောပါ။ မျောစကို အစုရှယျယာဈေးကတော့ တနင်ျလာနမှေ့ာ ပိတျထားပါတယျ။
ရှဈေေးတှလေညျးတကျနပွေီး တအောငျစကို ၂၅ ဒျေါလာထိ ဈေးတကျလာတဲ့အတှကျ လကျရှိရှတေအောငျစ ၁၉၉၂. ၉ ဒျေါလာဈေးပေါကျပါတယျ။ ယူကရိနျးအကွပျအတညျးကွောငျ့ ရနေံဈေးတှတေကျနခြေိနျမှာပဲ လဈဗြားနိုငျငံက နိုငျငံပိုငျရနေံ ကုမ်ပဏီတခုကို လဈဗြားလကျနကျကိုငျတှပေိတျပဈခဲ့တဲ့အတှကျ ရနေံနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဖိအားတှေ ထပျပွီးတိုးလာနပေါတယျ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုင်းကြောင့်သေကျေထိခိုက်သူ ၃ လအတွင်း ၁ ရာကျော်ရှိ (ယူနီဆက်)